ထီဖှငျ့တဲ့ မနကျမှာ ဘဝ ကို ပွောငျးလဲသှားစတေဲ့ ဖုနျးတကော – Let Pan Daily
ထီဖှငျ့တဲ့ မနကျမှာ ဘဝ ကို ပွောငျးလဲသှားစတေဲ့ ဖုနျးတကော
Let Pan | October 2, 2020 | Local News | No Comments
လှံထမျးလာတာပဲ မွငျရတယျ ကံထမျးလာတာ မမွငျရဘူး ဆိုတာ တယျမှနျသကို
ဖုနျးသံမွညျလာ လို့ ကွညျ့လိုကျတော့ နံပါတျကအစိမျးကွီး ဘယျကပါလဲဆိုပွီး ဖုနျးကိုငျလိုကျတော့… “ဟယျလို——–ထီဆိုငျကပါခငျဗြ…” ဝုနျးကနဲထထိုငျလိုကျပွီး ကတုနျကရငျဖွဈသှားတဲ့စိတျတှကွေောငျ့ စကားလုံးတှတေောငျ ရဈသမျမမှနျခငျြတော့
“ဟယျလို ဟယျလို ဟုတျကဲ့ပွောပါ” “——— ထီဆိုငျက ထီမြားထိုးထားသေးလားဗြ” “ဟာ…ဟုတျ ထိုးတာ ပေါ့ဗြာ အဲ့ထီသညျဆီက ကြှနျတျောလတိုငျးထိုးတာဗြ ဒီတဈပါတျမှာလညျး ထိုးထားပါတယျဗြ…” စကားတှကေရားရလှေတျတှပွေောမိပွီး ရငျတှကေလဲခုနျ အငျး ခွထေောကျတှေ ပါတုနျနတောဗြ
တဈဖကျက ပွောလာမယျ့ စကား ကို ရငျမောစှာ စောငျ့နမေိ ခေါငျးထဲမှာရော မကျြလုံးထဲမှာပါ တိုကျတှပေျေါလာလိုကျ ၊ ကားတှမွေငျလိုကျနဲ့ပေါ့ဗြာ… ဟီးဟီး…ဖွဈနတောဖွဈနတော ..
“လူကွီးမငျး အဲ့ဆိုငျက ထီထိုးထားသာ သခြော ရငျတော့ စိတျမကောငျးပါဘူး အဲ့ထီသညျဦးကွီး ကိုဗဈ ကူးစကျခံထားရပွီမို့ သူ့ထံမှ ထီထိုးထားသူအားလုံး ၂၁ ရကျ Q ဝငျရပါမယျ ဆေးစဈရပါမယျ….. အခုပဲလူကွီးမငျးကို လာရောကျ ချေါဆောငျ တော့မှာမို့ အဆငျသငျ့ပွငျဆငျထားဖို့ အကွောငျးကွားတာပါ ဒါပါပဲ” …..ဂှပျ…. “တိနျ”
Zaw Zaw Aung Aung
လှံထမ်းလာတာပဲ မြင်ရတယ် ကံထမ်းလာတာ မမြင်ရဘူး ဆိုတာ တယ်မှန်သကို
ဖုန်းသံမြည်လာ လို့ ကြည့်လိုက်တော့ နံပါတ်ကအစိမ်းကြီး ဘယ်ကပါလဲဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့… “ဟယ်လို——–ထီဆိုင်ကပါခင်ဗျ…” ဝုန်းကနဲထထိုင်လိုက်ပြီး ကတုန်ကရင်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေကြောင့် စကားလုံးတွေတောင် ရစ်သမ်မမှန်ချင်တော့
“ဟယ်လို ဟယ်လို ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ” “——— ထီဆိုင်က ထီများထိုးထားသေးလားဗျ” “ဟာ…ဟုတ် ထိုးတာ ပေါ့ဗျာ အဲ့ထီသည်ဆီက ကျွန်တော်လတိုင်းထိုးတာဗျ ဒီတစ်ပါတ်မှာလည်း ထိုးထားပါတယ်ဗျ…” စကားတွေကရားရေလွှတ်တွေပြောမိပြီး ရင်တွေကလဲခုန် အင်း ခြေထောက်တွေ ပါတုန်နေတာဗျ
တစ်ဖက်က ပြောလာမယ့် စကား ကို ရင်မောစွာ စောင့်နေမိ ခေါင်းထဲမှာရော မျက်လုံးထဲမှာပါ တိုက်တွေပေါ်လာလိုက် ၊ ကားတွေမြင်လိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ… ဟီးဟီး…ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ ..
“လူကြီးမင်း အဲ့ဆိုင်က ထီထိုးထားသာ သေချာ ရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး အဲ့ထီသည်ဦးကြီး ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရပြီမို့ သူ့ထံမှ ထီထိုးထားသူအားလုံး ၂၁ ရက် Q ဝင်ရပါမယ် ဆေးစစ်ရပါမယ်….. အခုပဲလူကြီးမင်းကို လာရောက် ခေါ်ဆောင် တော့မှာမို့ အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အကြောင်းကြားတာပါ ဒါပါပဲ” …..ဂွပ်…. “တိန်”
သုံးပန်လှ K.T.V သတင်း အရ ဝင်စစ် လိုက်သောအခါ
ဆန် (၁) ပြည် (၁၁၀၀)ကျပ် ထက်ပို မရောင်းရန် (ဆန်စပါး အသင်းချုပ် အရန်ဆန် ရောင်းချပေးမည်)
မိုးရာသီ သွေးလွန်တုပ်ကွေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် နှင့် လိုက်နာရန် အချက်များ
“ရေကျ ချိန်မှာ အလွမ်းပြေ သွားရောက်ဖူးေ မျှာ်ရင်း ဒေသခံတွေ မျက်ရည်စို့ရတဲ့ သဖန်းဆိပ်ဆည် ထဲက ဘုရားကြီး”